moi: Food provided to villages in Maungtaw
Food provided to villages in Maungtaw
After the violent attacks in Maungtaw Township, Rakhine State, security forces are working for regional security as well as ensuring peace and stability. The Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement and the Rakhine State Government are also providing food to locals.
Union Minister for Social Welfare, Relief and Resettlement Dr. Win Myat Aye, Rakhine State Chief Minister U Nyi Pu and the State Cabinet together with officials went to Pan Taw Pyin, Ywa Thit Kay, Tet Oo Chaung, Gaw Du Thara and U Daung villages in the Southern part of Maung Taw Township to meet with the locals. They provided food such as rice, edible oil, salt, beans and dried fish.
While meeting with locals, the Union Minister asked about accommodation and health. They replied that there was no difficulty for their heath, shelter, and clothes but only difficulty in transportation because of security.
Gaw Du Thara village administrator U Tin Aung said “Schools have been opened in ethnic villages but doors of the schools in other villages are still shut.”
The Union Minister and party also visited Maungtaw Township People’s Hospital to comfort the patients who are receiving medical treatment.
They also proceeded to ethnic villages in the northern part of Maungtaw such as Aung Zeya, Aung Thaya and Aung Mingalar villages and met with locals. They also provided food and toys for children.
A local from Aung Mingala village said, “Guard duty is assigned at night for village security. Schools are being opened now but teachers from other regions have not come back yet. The strength of faculty members is few for education.”
The Union Minister and party met with staff of No.1 Border Guard Police Control Command and their families and presented snacks and toys for the kids.
“We visited the places where the attacks happened in Maungtaw Township, Sunday morning as well as four ethnic villages and4other villages. We provided food such as rice, edible oil, beans and other items to locals who live with poor transportation access. We found that all children in eight villages are in good health. It is not true that all children are malnourished” said Union Minister Dr. Win Myat Aye to the media.
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများသို့ စားနပ်ရိက္ခာများ ထောက်ပံ့
မောင်တော နိုဝင်ဘာ ၂၀
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက နယ်မြေလုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်း ရေးအတွက် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသကဲ့သို့ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည် နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့တို့မှလည်း စားနပ်ရိက္ခာများ ပို့ဆောင်ထောက်ပံ့လျက်ရှိသည်။
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးချုပ် ဦးညီပုနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးများသည် တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ယနေ့နံနက် ပိုင်း တွင် မောင်တောမြို့နယ် တောင်ဘက်ပိုင်းရှိ ပန်းတောပြင်၊ ရွာသစ်ကေ၊ တပ်ဦး ချောင်း၊ ဂေါ်ဒူသာရ၊ ဥဒေါင်းကျေးရွာများသို့ သွားရောက်၍ ဒေသခံ လူထုနှင့် တွေ့ဆုံ ကာ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲနှင့် ငါးခြောက်စသည့် စားနပ်ရိက္ခာများ ထောက်ပံ့ ပေးအပ်သည်။
ယင်းသို့ ဒေသခံများနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက နေရေးထိုင်ရေး၊ ကျန်းမာရေးစသည့် အခက်အခဲများကို မေးမြန်းရာ လုံခြံရေးအခြေအနေကြောင့် သွားရေးလာရေးအတွက်သာ အခက်အခဲရှိပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲမရှိကြကြောင်း ဒေသခံများက ပြန်လည် ပြောကြားကြသည်။
ဂေါ်ဒူသာရ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်အောင်က " တိုင်းရင်းသား ကျေးရွာတွေမှာတော့ စာသင်ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်နေပါပြီ။ အခြားရွာတွေမှာတော့ ပြန်ဖွင့်တာ မတွေ့ရသေးပါဘူး" ဟု ပြောကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မောင်တောမြို့ပြည်သူ့ ဆေးရုံသို့ သ္ပွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူနေသည့် လူနာများကို အားပေးနှုတ်ဆက် ကြသည်။
ယင်းနောက် မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ဘက်ပိုင်းရှိ တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ များဖြစ်သည့် အောင်ဇေယျ၊ အောင်သာယာနှင့် အောင်မင်္ဂလာကျေးရွာများသို့ သွားရောက်ပြီး ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ကာ စားနပ် ရိက္ခာများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်မှုနှင့်အတူ ကလေးငယ်များအတွက်လည်း ကစားစရာ အရုပ်များ ပေးအပ်ကြသည်။
အောင်မင်္ဂလာကျေးရွာမှ ရွာသားတစ်ဦးက "ရွာလုံခြုံရေးအတွက် ညဘက်မှာ ကင်းစောင့်တာဝန်ချထားတွေ လုပ်ဆောင်နေရပါတယ်။ စာသင်ကျောင်းတွေ လည်း ပြန်ဖွင့်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် နယ်ဝေးကဆရာ ဆရာမတွေကတော့ ပြန်မရောက်ကြသေး ပါဘူး။ ပညာရေးအတွက် ဆရာအင်အား နည်းပါတယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် အဖွဲ့သည် အမှတ်(၁)နယ်ခြားစောင့် ရဲကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှ ၀န်ထမ်းမိသားစုများနှင့် တွေ့ဆုံအားပေးစကားပြောကြားပြီး ကလေးငယ်များအတွက် မုန့်နှင့်အရုပ်များ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
''ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့မနက် မောင်တောမြို့နယ်မှာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွား ခဲ့တဲ့နေရာတွေကို သွားခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားကျေးရွာ လေးရွာနဲ့ အခြားရွာ လေးရွာကို သွားခဲ့ပါတယ်။ နယ်မြေလုံခြုံရေး အခြေအနေကြောင့် သွားလာ ရေးခက်ခဲ နေ တဲ့ ဒေသခံတွေဆီကို အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ ဆန်၊ ဆီ၊ ပဲ စတဲ့ စားနပ်ရိက္ခာတွေ သွားရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့တာပါ။ ရောက်ခဲ့တဲ့ ရွာရှစ်ရွာစလုံးမှာ ငါးနှစ်အောက် ကလေး ငယ်တွေအားလုံးက ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကောလာ ဟလပြောနေကြသလို ကလေးငယ်တွေ အာဟာရချို့တဲ့နေတယ်ဆိုတာ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး" ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ၀င်းမြတ်အေးက သတင်းမီဒီယာများ အား ပြောကြားသည်။